IFitFanatic ithi masizivalele sizivocavoce - Ilanga News
Home Impilo IFitFanatic ithi masizivalele sizivocavoce
U-AMANDA Mbongwa, odume ngeleFitFanatic kwezokuzivocavoca uthi ingxenye enkulu yesi-khathi sokuzivalela endlini kumele isetshenziswe ukunyakazisa umzimba.
Uthi ukuzivocavoca nokulula imisipha kakudingi kube yinto eyenziwa kuphela uma niyiqoqo futhi ningaphandle. Ziningi izindlela athi zingagcina umzimba usesimweni esihle.
“Inkinga enkulu ngalesi sikhathi wukuthi abantu bazobe bedla ngo-kweqile, kwazise imvamisa isithukuthezi noku-ngenzi lutho kukwenza ubhorekele efrijini nasekhabetheni.
“Kumele abantu baqikelele ukuthi bathenga kakhulu ukudla okunempilo njengama-vege nama-fruit noma amakinati uma behalela ukuhlafuna.
“Makungagcwali izicoficofi nezibiliboco emakhabetheni. Akudingi ukuba uze ube nemali eningi ukuqinisekisa ukuthi umzimba uwugcina wondleke kahle kodwa kuba yilezo zinto ezincanyana okumele uziqaphele,” esho.
Uthi into yokuqala ebalulekile uma uvuka ekuseni wukuphuza amanzi anolamula ne-ginger ukukhuculula umzimba.
Ungagcini ekuseni kuphela kodwa udamane uthi qhabu ngaso sonke isikhathi uku-ze umzimba uhlale unesikalo samanzi esi-dingekayo.
Ukuze uzinike isikhathi esanele sokuzivocavoca, uthi kumele umuntu azibekele umgomo wokuvuka ngaphambi kokuba kuvuke abanye ukuze angaphazamiseki.
Ezinye zezindlela zokuzivocavoca usendlini
U-Amanda uthi uma uvuka nje into yokuqala ongayenza ama-squats, ngelinye ilanga kube ama-jumping jack, ula-ndelanise ngokweqa intambo (skipping) noma i-mountain climbing.
Uthe umuntu kumele aqale kancane mhlawumbe ngosuku lokuqala enze awu-10 bese enyuka njalo ngosuku, kuthi uma sekushaya usuku luka-21 kube sekulula ukwenza angu-100 ungaphumulanga.
Konke lokhu uthi kumele kuhambisane nokuthi ivuleke kangakanani indawo yakho.
Ngaphandle kokuzivocavoca, uthe lesi yisikhathi sokubuyekeza impilo yakho nokuhlahla indlela yempilo eya phambili kungekho izihibe ezikuthikamezayo njengomsebenzi nokunye.
Uthe lokhu unga-kwenza ngokufunda izincwadi, udlale nabantwana noma uthole isikhathi sokuzithola uwedwa (meditation).
Previous articleKunomvuzo ukusebenzisa umeluleki wezemali
Next articleUkuzivalela ngenxa ye-Coronavirus kungayiphazamisa ingqondo
Iphenduke ikwajombigazi iKZN kuqothwa inqwaba yabantu
Intsha ifundiswe umlando ngempi yaseSandlwana
Siqubule itwetwe isimemezelo se-Eskom
Iphenduke ikwajombigazi iKZN kuqothwa inqwaba yabantu 17th Jan 2022
Intsha ifundiswe umlando ngempi yaseSandlwana 17th Jan 2022
Siqubule itwetwe isimemezelo se-Eskom 17th Jan 2022
“Ukuthula kufana nokudayisa isizwe” 17th Jan 2022
IChiefs seyilushove kwiSafa olwePSL 17th Jan 2022
Archives Select Month Jan 2022 Dec 2021 Nov 2021 Oct 2021 Sep 2021 Aug 2021 Jul 2021 Jun 2021 May 2021 Apr 2021 Mar 2021 Feb 2021 Jan 2021 Dec 2020 Nov 2020 Oct 2020 Sep 2020 Aug 2020 Jul 2020 Jun 2020 May 2020 Apr 2020 Mar 2020 Feb 2020 Jan 2020 Dec 2019 Nov 2019 Oct 2019 Sep 2019 Aug 2019 Jul 2019 Jun 2019 Apr 2018 Jul 2017